သူမှ မခဈြတော့ရငျ …. – Shinyoon
သူမှ မခဈြတော့ရငျ ….
အခဈြတဲ့ ဖနျတီးယူလို့မရသလို အတငျးအကပျြကွီး လုပျယူလို့မှမရပဲလေ … ခဈြတယျမခဈြဘူးဆိုတာ စကားတှထေကျ လုပျရပျတှကေပဲ သကျသပွေပါတယျ … ပါးစပျကနေ ဘယျလောကျပဲ ခဈြတယျပွောပွော သူတကယျခဈြမခဈြ သူ့အပွောအဆို သူ့အနအေထိုငျ သူ့လုပျရပျတှကေနေ ပွလာတတျပါတယျ …
သူမှ မခဈြတော့ရငျ ဆိုတဲ့ အတှေးလေး ဟိုးအရငျနှဈတှကေ တှေးခဲ့ဖူးတယျ ..အဲ့ဒီတုနျးကတော့ ဒီလောကျမခဈြမိသေးဘူးထငျပါတယျ သူမှ မခဈြတော့ရငျ ငါလဲ မခဈြပဲ နလေိုကျမှာပေါ့ဆိုတဲ့ ခပျပေါ့ပေါ့ဆုံးဖွတျခကျြလေးပဲ ခတြယျ .. အရာဟာပေါ့သေးသေးလေးလိုပါပဲ သူမှ မခဈြရငျ ငါလဲ မခဈြတော့ဘူးဆိုတဲ့ ကလေးအတှေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ဖွတျသနျးခဲ့ဖူးတယျ …
ဒီဘကျနှဈတှမှော အတှေးဟာ လကျတှဖွေ့ဈလာတယျ … တဈနတေ့ဈနေ့ ကိုယျ့အတှကျ မအားတဲ့အခြိနျတှကွေားမှာ မြှျောရတဲ့ရကျတှဟော တဖွေးဖွေးစိပျစိပျလာတယျ … ကိုယျကလှဲရငျ ဘယျအရာကမဆို တဖွေးဖွေး အရေးပါတတျတဲ့သူနဲ့ သူကလှဲရငျ တဈလောကလုံးကို မကျြနှာလှဲထားတဲ့ကိုယျ သဘောထားခငျြး ကှဲလှဲလာတယျ … အမွဲတမျး ရနျရှာတတျတဲ့ မိနျးမမြိုး မဟုတျပမေယျ့ သူပဈထားတဲ့အခြိနျတှမှော ဝမျးနညျးနတေတျသေးတယျ …
သူမခဈြတော့ရငျ … ငါလဲ မခဈြတော့ဘူးဆိုတဲ့ ကလေးအတှေးတှဟော တဖွေးဖွေး ပြောကျဆုံးလာပွီး တဈနကေ့ရြငျတော့ သူခဈြလာမှာပါဆိုပွီး ရပျနမေိသေးတယျ .. နာကငျြနပေါပွီ ပူလောငျနပေါပွီလို့ပွောရအောငျကလဲ ဒီအပူတှကေိုမှ ကိုယျက တှယျတာနမေိတာလေ … ကိုယျ့ကိုယျ သဲသဲလှုပျခဈြမယျ့သူကိုပဲ ရှေးမယျဆိုတဲ့ အိပျမကျလေးတှဟော ကိုယျ့ကို မခဈြတဲ့သူကိုမှ ဖကျတှယျထားတဲ့ လကျတှဘေ့ဝတှနေဲ့ ခွားနားတယျ …
တကယျဆိုရငျလေ … သူမှ ကိုယျ့ကို မခဈြတော့တာ သူ့အနားရပျနလေို့လဲ ဘာထူးလို့လဲဆိုတဲ့ မာနလေးတှေ ရှိခဲ့သငျ့တာ တကယျခဈြမိသှားတဲ့အခါ အဲ့ဒီမာနလေးတှကေလဲ မဲ့တယျ ငါ့ကို မှမခဈြပဲလေ နနေိုငျအောငျနမေယျဆိုတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြလေးတှဟောလဲ ခဏပဲခံတာပါ ဖုနျးဆကျနကေအြခြိနျလေးရောကျရငျ သူ့အသံလေးကွားခငျြတယျ ….
သူမှ မခဈြပဲလေ … တဈနကေ့ရြငျတော့ အမွငျမှနျရလာမှာပါ အခုတော့ နာကငျြနတေဲ့ဒဏျကို ခံရငျး ဖကျတှယျထားမိနတေုနျးပဲ …
သူမှ မချစ်တော့ရင် ….
အချစ်တဲ့ ဖန်တီးယူလို့မရသလို အတင်းအကျပ်ကြီး လုပ်ယူလို့မှမရပဲလေ … ချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတာ စကားတွေထက် လုပ်ရပ်တွေကပဲ သက်သေပြပါတယ် … ပါးစပ်ကနေ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်တယ်ပြောပြော သူတကယ်ချစ်မချစ် သူ့အပြောအဆို သူ့အနေအထိုင် သူ့လုပ်ရပ်တွေကနေ ပြလာတတ်ပါတယ် …
သူမှ မချစ်တော့ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးလေး ဟိုးအရင်နှစ်တွေက တွေးခဲ့ဖူးတယ် ..အဲ့ဒီတုန်းကတော့ ဒီလောက်မချစ်မိသေးဘူးထင်ပါတယ် သူမှ မချစ်တော့ရင် ငါလဲ မချစ်ပဲ နေလိုက်မှာပေါ့ဆိုတဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးပဲ ချတယ် .. အရာဟာပေါ့သေးသေးလေးလိုပါပဲ သူမှ မချစ်ရင် ငါလဲ မချစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ကလေးအတွေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတယ် …
ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ အတွေးဟာ လက်တွေ့ဖြစ်လာတယ် … တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ့်အတွက် မအားတဲ့အချိန်တွေကြားမှာ မျှော်ရတဲ့ရက်တွေဟာ တဖြေးဖြေးစိပ်စိပ်လာတယ် … ကိုယ်ကလွဲရင် ဘယ်အရာကမဆို တဖြေးဖြေး အရေးပါတတ်တဲ့သူနဲ့ သူကလွဲရင် တစ်လောကလုံးကို မျက်နှာလွဲထားတဲ့ကိုယ် သဘောထားချင်း ကွဲလွဲလာတယ် … အမြဲတမ်း ရန်ရှာတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် သူပစ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာ ၀မ်းနည်းနေတတ်သေးတယ် …
သူမချစ်တော့ရင် … ငါလဲ မချစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ ကလေးအတွေးတွေဟာ တဖြေးဖြေး ပျောက်ဆုံးလာပြီး တစ်နေ့ကျရင်တော့ သူချစ်လာမှာပါဆိုပြီး ရပ်နေမိသေးတယ် .. နာကျင်နေပါပြီ ပူလောင်နေပါပြီလို့ပြောရအောင်ကလဲ ဒီအပူတွေကိုမှ ကိုယ်က တွယ်တာနေမိတာလေ … ကိုယ့်ကိုယ် သဲသဲလှုပ်ချစ်မယ့်သူကိုပဲ ရွေးမယ်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်လေးတွေဟာ ကိုယ့်ကို မချစ်တဲ့သူကိုမှ ဖက်တွယ်ထားတဲ့ လက်တွေ့ဘ၀တွေနဲ့ ခြားနားတယ် …
တကယ်ဆိုရင်လေ … သူမှ ကိုယ့်ကို မချစ်တော့တာ သူ့အနားရပ်နေလိုိ့လဲ ဘာထူးလို့လဲဆိုတဲ့ မာနလေးတွေ ရှိခဲ့သင့်တာ တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့အခါ အဲ့ဒီမာနလေးတွေကလဲ မဲ့တယ် ငါ့ကို မှမချစ်ပဲလေ နေနိုင်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေဟာလဲ ခဏပဲခံတာပါ ဖုန်းဆက်နေကျအချိန်လေးရောက်ရင် သူ့အသံလေးကြားချင်တယ် ….
သူမှ မချစ်ပဲလေ … တစ်နေ့ကျရင်တော့ အမြင်မှန်ရလာမှာပါ အခုတော့ နာကျင်နေတဲ့ဒဏ်ကို ခံရင်း ဖက်တွယ်ထားမိနေတုန်းပဲ …
ပွီးခဲ့သော ဇာတျလမျး …